Boky fandokoana sy seho mivantana an'ireo mpanakanto malaza avy amin'i Adobe | Famoronana an-tserasera
Filokana maimaimpoana an'i Adobe ho an'ny fitanana: boky fandokoana sy fotoam-pivoriana miaraka amin'ireo mpanakanto sangany
Tsy hamerina izay efa nolazaina tsy misy fetra tato anatin'ireto herinandro ireto izahay momba ny zavatra hatao andro-any. Ity no filokana malalaka adobe: boky sy fandokoana fandokoana miaraka amin'ireo mpanakanto tsara indrindra.
Adobe dia nanao ho an'ny rehetra Boky fandokoana avy amin'ny mpanakanto toa an'i Lisa Congdom na Martina Martian hahafahanao manonta azy ireo any an-trano ka mila miloko ireo ankizy kely ao an-trano amin'izao fotoana izao. Fa tsy izany ihany fa misy ny sesiona.
Manomboka amin'ny fampidinana azonao eto: misintona boky fandokoana adobe
Rehefa mampiditra an'io rohy io ianao dia hahita ireo sary masina telo an'ny misintona amin'ny endrika telo: PDF, PSD ary JPG. Manana toko voalohany ianao manomboka amin'ity herinandro ity ary hanampy vaovao ho an'ny manaraka.
Mandritra ny 8 herinandro misy toko 8 mampidina pejy fandokoana mpanakanto toa azy ireo Jessica Hische, Lisa congdon, Adam J. Kurtz, Martina martian y Lauren Hom. Ao amin'ny rohy misy azy ireo no ahafahanao miditra amin'ny kaonty Instagram azy ireo.
Ireo fanoharana fandokoana ireo dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana sary, na dia ny zavatra tsara indrindra dia mahay manonta azy ireo Raha te handray ireo pensily miloko na loko ary mifalifaly amin'ireo ankizy kely ao an-trano.
Ny filokana malalaka faharoa an'i Adobe dia Adobe Live session miaraka amin'ireto mpanakanto ireto ihany ary avy eo ianaro avy amin'ny tanan'izy ireo ireo torohevitra sy tetika tsara indrindra avy amin'ny fampiharana toa ny Adobe Fresco. Manana ny fotoana rehetra amin'ity rohy ity ianao: Sesi-kanto an'ny Adobe.
Toy ny Thyssen Museum, nanome taranja kanto an-tserasera tena tsara maimaim-poana, Miditra amin'ny fanomezana atiny maimaimpoana i Adobe izay azontsika andaniana fotoana tsara kokoa amin'izao andro fitanana izao; iray amin'i Edward Hopper sy ny hafa momba ny hazavana sy ny hosodoko.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Filokana maimaimpoana an'i Adobe ho an'ny fitanana: boky fandokoana sy fotoam-pivoriana miaraka amin'ireo mpanakanto sangany
Ahoana ny fanondranana rakitra ao amin'ny Adobe Illustrator
Ahoana ny fiasan'ny sosona amin'ny Adobe Photoshop